आज मातातीर्थ औंशी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन - Syangja Serofero
Updated: ११ जेष्ठ २०७८ ०८:५८
आज मातातीर्थ औंशी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन
११ जेष्ठ २०७८ ०८:५८
काठमाडौं : आज मातातीर्थ औंसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुका लागि आजको दिन विशेष रहेको छ । आमा शब्द आफैँमा त्यति महत्वपूर्ण छ कि, हामीले त्यसको महमिा र वर्णन गरेरै सक्दैनौँ ।
घर परिवारमा आमासँगै रहेका र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न देश विदेशमा आमासँग टाडा रहेर आमाको न्यानो मायाको न्यास्रो लाग्नेहरुलाई आमाको महत्व धेरै हुन्छ ।
विशेष गरि आजको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा कोभिड-१९ (नोवेल कोरोना भाईरस) फैलिरहेको बेला सन्तानले आमालाई सम्झने र आमाले सन्तानलाई सम्झने हरुका लागि समय व्यतित गर्न गाह्रो भईरहेको छ ।
अझ भन्नुपर्दा आफू सानु छँदा आमा स्वर्गलोक हुनेहरुलाई भने वास्तवमै आमाको अभाव सधैभरि खट्कि रहन्छ । हाम्रो घर,परिवार र समाजमा कतिपयले आमाको मुख वा आमाको मायाको अनुभव गर्नै नपाई आमा स्वर्गवास हुनु भएको छ ।
कसैलाई आमाको अनुहार अलिअलि थाहा छ तरपनि अहिले आमाको तस्वीर हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
हो हरेक वर्षको बैशाख कृष्णपक्षको औंशीमा आमाको मुख हेर्ने चलन रहेको छ, आजको यस दिनलाई मातातीर्थ औंशी, मातृऔंशी एवं मातृ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ ।
आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मान गरिएको हुँदा यस दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ ।
आजको दिन बिहानै उठेर नित्य कर्म गरिसकेपछि आमासँगै हुनेहरुले आमालाई उपहार प्रदानगर्ने, मिष्ठान्न भोजन खुवाई आमाको मुख हेर्ने र आशीर्वाद लिने गरिन्छ ।
विवाह गरेरे आफ्नो घर गएका छोरीहरु पनि आमाको मुख हेर्न टाडा टाडाबाट भेट्न आउछन् । आमालाई भेट्न नपाउनेहरुले फोनबाट वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आमालाई सम्झिने गर्दछन् ।
पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आएको आमाको मुख हेर्ने दिन आमाले गरेका महान् कष्ट र पूर्णकामहरुको सम्झना गरिन्छ ।
आमा नभएकाहरूले पनि आमाको आत्माको मुक्तिको कामना गर्दै आज श्राद्ध तर्पण गरी मातृत्वको स्मरण गर्दछन् । आज काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायले भने भक्तपुरको हनुमानघाट पुगी आमाको सम्झनामा परम्परा अनुसार श्राद्ध तर्पण गर्दछन् ।
मातातीर्थ औंसीका दिन काठमाडौंको थानकोट नजिकै अवस्थित मातातीर्थमा धुमधामका साथ मेला लाग्ने गर्दथ्यो, तर यस वर्ष भने कोरोना महामारीको संकटका कारण मेला लाग्ने छैन ।
तीर्थाटनमा सहभागीहरुले मातातीर्थ कुण्डमा स्नान गर्दछन् । जनश्रुति अनुसार पहिले मातातीर्थमा गोठालाहरुले गाईवस्तुहरु चराउने मैदान थियो । एक दिन त्यो मैदानमा एउटा गोठालाले फ्याँकेको रोटीको टुक्रा अनाचक हराउन पुग्यो । त्यो घटनाले गोठालाहरु अचम्मित भए ।
गोठालाले पुन अरु रोटीका टुक्राहरु पनि फ्याँके । ती टुक्राहरु क्रमशः हराउँदै गए । ती गोठालाहरु मध्ये एउटाको आमा थिइन् भने अरुका आमा थिएनन् । तर आमा हुने गोठालाले फालेको रोटीको टुक्रा भने हराएनन् । आमा नहुने गोठालाहरुले फ्याँकेका रोटीका टुक्रामात्रै हराए । उक्त दिन बैशाख कृष्णपक्ष औंशी थियो । यो कुरा अरु गाउँलेहरुले पनि थाहा पाए ।
गाउँलेहरुले उक्त दिन मृत्यू भइसकेका आमाले छोराछोरीले दिएका चिज खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वास गरे । हरेक वर्ष उक्त औंशीका दिन मातातीर्थको चौरमा आमाको मृत्यू भइसकेकाहरुले विभिन्न मिष्ठान भोजन लगेर चढाउन थाले ।
पछि त्यहाँ एउटा कुण्ड समेत बनाइयो र मातातीर्थका नामले प्रचलनमा ल्याइयो । यसरी हरेक बर्ष आमा नहुनेहरुले मातातीर्थमा गई त्यहाँको कुण्डमा नुहाउने र मृतक आमाका नाममा मीठामीठा खाद्यपदार्थ चढाउने प्रचलन कायम भयो । आमाप्रतिको श्रद्धास्वरुप मातातीर्थमा ‘साझा आमा’ को मूर्ति समेत स्थापना गरिएको छ।
मातातीर्थ औंशीजन्म दिने आमाप्रति आदर व्यक्त गर्न पौराणिक कालदेखि मनाइदै आएको पर्व हो । आजको दिन आमाले गरेका महान् कष्टपूर्ण कामहरुको सम्झना गरिन्छ ।
आजको दिन आमाप्रति सम्मान र आमालाई सम्झने दिन हो । देवीको प्रतिरुप, ममताकी खानी र वालापनामा हाम्रा हरेक इच्छा, आकांक्षा पूरा गरिदिने कल्पवृक्ष सरी यस पृथ्वी लोकका सम्पूर्ण आमाहरुलाई कोटी–कोटी नमन छ ।
ज्यो. दुर्गा भण्डारी ।
स्याङजाको भीरकोट नगर अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट निर्माण
स्याङ्जा सेरोफेरो - ११ बैशाख २०७७ ०३:३५
स्याङ्जा कोरोना अपडेट
स्याङ्जामा ९३ जना कोरोना संक्रमित थपिए
स्याङ्जामा १३३ जना कोरोना संक्रमित थपिए
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी स्याङ्जाका ११ तहलाई ४ अर्व ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन
Syangja Serofero Dot Com is Syangja's trusted digital news media that tells and disseminates the truth as it is by observing all decencies by refraining from allying with any special interest.
© Syangjaserofero.com | All rights reserved.